अस्पताल जलिरहयो, मुटुरोगीको अपरेसन चलिरह्यो ! | दर्पण दैनिक
अस्पताल जलिरहयो, मुटुरोगीको अपरेसन चलिरह्यो !
प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र २१ गते ०६:४४
एजेन्सी । रुसको एक अस्पतालमा आगो लागिरहेकै बेला चिकित्सकहरुको टोलीले एक बिरामीको मुटुको सफल शल्याक्रिया गरे । अस्पतालको छतमा जब आगो लागिरहेको थियो ठीक त्यसै बेला चिकित्सकहरुले भने आफूहरुले गरिरहेको अपरेशन सम्पन्न गरेरै छाडे ।
आगो लागिरहेका बेला १२० जना भन्दा धेरै मानिसलाई अस्पतालबाट सुरक्षित रुपमा बाहिर निकालिएको थियो । साथै अपरेशन चलिरहँदा अग्नी नियन्त्रकहरुले आगो निभाइरहेका थिए । तर आगलागीका कारण कोही पनि घाइते नभएको बताइएको छ ।
रुसको पूर्वी क्षेत्रस्थित ब्लागोभेसचेन्स्कमा सारिस्ट एरा अस्पतालमा यस्तो घटना भएको हो । आगो लागिरहँदा ती बिरामीको अपरेशनमा ८ जना चिकित्सक र नर्स खटेका थिए । आगो लाग्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै सुरु गरिएको शल्याक्रिया २ घण्टासम्म चलेको बताइएको छ । रुसी सरकारका अनुसार उक्त अस्पताल १९०७ मा बनेको थियो । अस्पतालमा काठ समेत जडान गरिएको थियो । (अन्नपूर्ण)
विश्वभर ५ लाख ७४ हजार नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए
२०७७ चैत्र २५ गते ०८:०३
काठमाडौं । विश्वभर गत २४ घण्टामा कूल पाँच लाख ७४ हजार ७५३ जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएको वर्ल्डओमिटर्सले जनाएको छ। यससँगै विश्वभर हालसम्मको कूल सङ्क्रमितको सङख्या १३ करोड ३० लाख नौ हजार ५५१ पुगेको छ। गत २४ घण्टामा भारतमा सर्वाधिक एक लाख १५ हजार २६९ मा सङ्क्रमण देखिएको छ।
पाकिस्तानमा चिनी किलोको रु १६०
२०७७ चैत्र २४ गते ०४:०८
एजेन्सी । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा चिनीको अभाव भएको छ। बजारमा पाकिस्तानी रूपैयाँ १६० मा चिनी बेच्न थालिएको छ । भारतसँग चिनी खरिद सम्झौता हुन नसकेपछि त्यहाँ अभाव हुन थालेको हो ।